Ny misandratr’andron’ny 22 mey lasa teo no nitrangan’izany. Tsy nahatanty izany ireo fokonolona tao an-tanana ka avy hatrany dia nisambotra ity dadabe tsy mataho-tody ity niaraka tamin’ny polisy kaominaly. Natolotra ny zandary ny atoandron’ny 23 mey 2020 lasa teo ny lehilahy noho izany. Notazomina natao famotorana avy hatrany izy ary efa natolotra ny fampanoavana. Tsiahivina moa fa mpamboly ity lehilahy nanolana ny zafikeliny ity.